ဆိတ်သားဒန်ပေါက် – Thet Nandar
သရက်သီးသနပ်၊ ပူစီနံ အချဉ်၊ ဆိတ်သား ဒန်ပေါက်၊ ဘာလချောင်ကြော်
ဆိတ်သား ဈေးနှုန်း ။ တကဒ်ကို တပေါင် သာသာ အလေးချိန်
ဆိတ်သား ၄ ကဒ်၊ ၄ ပေါင် လောက် ရှိတဲ့ ဆိတ်သားတုံးတွေကို ရှာလကာရည် နှင့် ဖြစ်ဖြစ်၊ သံပုရာသီး တလုံးလောက် ညစ်ပီး ရေသေချာ ဆေးထားလိုက်ပါတယ်။
အခု ချက်စားတဲ့ ဒီ တံဆိပ် နှင့် …
ဒန်ပေါက် စချက်ခါစက Youtube ကနေ … ကြက်သားဒန်ပေါက် ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပီး … အိမ်မှာ အသားပဲ ပြောင်းသွားတယ်။ ချက်နည်း အဆင့်ဆင့်က ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဒီအတိုင်း ချက်စားတာ အဆင်ပြေတာလည်း ပါသလို … စားလို့လည်း ကောင်းတယ်။ အဲဒီ အရသာကို ကိုယ်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်တယ်။
နောက်မှ … အချိန်လေးယူ …Youtube ကြည့်ပီး … ချက်ပုံ ချက်နည်း ပြောင်းချက်ကြည့်ပါအုံးမည်။
* credit : http://youtu.be/PHoFQKcUK78
ကိုယ့် အိမ်ကို google ကနေ ဒန်ပေါက် search နှင့် ရောက်လာခဲ့ရင် .. AYL ( as u like ) ပါ … အင်တာနက်မှာ ချက်နည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ YouTube မှာဆို အများကြီးပါပဲ။
ဆိတ်သား – ၄ ပေါင် … ကို ဒန်ပေါက် မဆလာ တ၀က် နှင့် အရင်နှယ် ပီး … ဒိန်ချဉ် ( ဆန်ချိန်ခွက် ) ၁ ခွက် နှင့် နှယ်ပီး နှပ်ထားလိုက်တယ်။
ဘီဒိုထဲကနေ Ghee ( ထောပတ် ) ဗူး နှင့် အ၀ါရောင် အရောင်ဆိုးဆေးမှုန့်ပုလင်းကို ထုတ် …
Ghee … 1 cup ကို အပူပေးပီး …
ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးပီး ရေစစ်ထား …
Ghee – 1 cup ကို အပူပေးပီး ထောပတ်အရည်ပျော်လာတာနဲ့ ကြက်သွန်နီတွေကို ကြော်ပီး ဇကာပေါ် ဖြန့်ထားလိုက်တယ်။
ပီးတာနဲ့ ပျဉ်တော်သိမ်ရွက် ၂ ခက်လောက်ကို အရွက်တွေ ခြွေထားပီး Ghee ထောပတ်ဆီ နှင့် ဆီသတ်ကြော်လိုက်ပီးမှ နှပ်ထားတဲ့ ဆိတ်သားထည့် ဆီသတ်တယ်။ ဆိတ်သား အသားတွေ ကျစ်လာမှ …
pressure cooker အဖုံးမပိတ်ခင် ကျန်နေတဲ့ မဆလာ အထုပ် တ၀က်ကို ထည့်မွှေတယ်။
အဖုံးအုပ် ချက်ခါနီးမှ .. နောက်ထပ် ဒန်ပေါက်မဆလာ တ၀က်ကို ထည့်အုပ်ပီး ချက် တယ် ….
ရေ မထည့်ပဲ …. ဆိတ်သားထဲက လုံးရေ နှင့်ပဲ pressure cooker မှာ ၁၅ မိနှစ် လောက် မီးမြေးမြေး နှင့် ချက်ထားသော ဆိတ်သားဟင်း။ ၁၅ မိနစ်ပြည့်ရင် အဖုံးကို ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ပိတ်ထားပီး pressure cooker lock ကျမှပဲ အဖုံးဖွင့်လိုက်တယ် ….
အရောင်ဆိုးဆေး – အ၀ါရောင် အမှုန့်ကို လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၃ ပုံ ၁ ပုံ .. နွားနို့ … ၇ ဇွန်း နဲ့ ဖျော်ထားလိုက်တယ်။
မီးဖိုပေါ်က ရေနွေး ပွက်ပွက်ဆူထဲ .. ဆားကို ထမင်းစားဇွန်း … ၄ ဇွန်း ထည့် .. ဖာလာစေ့ ၇ စေ့ ထည့် … basmati6cups …. 12 မိနစ် လောက် ချက်လိုက်ရင် မနှပ်တနှပ် ထမင်းကို ရပါပီ …
ထမင်းကို ဇကာ နှင့် ထမင်းရည် စင်နေအောင် စစ်ထားလိုက်တယ်။
ထမင်း ချက်နေတုန်း .. oven ကို ၃၅၀º F ကြိုဖွင့်ပီး ပူနေအောင် ထား ထားလိုက်တယ်။
ထမင်းဖြန့် .. သီဟိုဠ်စေ့၊ စပျစ်သီးခြောက်ထည့်၊ ဆိတ်သားထည့်၊ ကြက်သွန်ကြော်ဖြန့်၊ ဆိတ်သား အသား အနှစ် နှင့် ဆီပါ ထည့် …
အပေါ်ကနေ ထမင်း ထပ်ဖြန့် … အရောင်ဆိုးဆေး ဖြန်း
aluminum foil အုပ်
နယူးယောက်မှ ၀ယ်စားသော ဒန်ပေါက်
မနက်မှပဲ ငါးသလောက်ပေါင်း၊ ငါးဖယ်ကြော်သုပ်၊ Snow ဓာတ်ပုံများ တင်တော့မည်။
2 thoughts on “ဆိတ်သားဒန်ပေါက်”